एउटा मान्छे ! व्यथा रिक्सा चालकको-Nagarikaawaj.com
एउटा मान्छे ! व्यथा रिक्सा चालकको
आइतवार, भदौ २२, २०७१
बुटवल । भदौ महिनाको उर्खमाउलो गर्मी। पसिनाले निथु्रक्क भिजेको मान्छे । दिउँसो १ बजेतिर ट्राफिकचोकदेखि केही तल आएर पिपलको रुखको छायाँमा दिनभरको साथी रिक्सासँग थकान मार्न खोज्दै गर्दा उताबाट प्रहरीले थर्कायो- ‘ओए रिक्सा उता जा’ । रिक्सा चालकले एकैछिन आराम गर्न हो सर भन्दै गर्दा ट्राफिक प्रहरीले उताबाट लौरोले पछाडिबाट मेलामा गोरुलाई हानेझै हिर्काउँदै अलिक पर पुर्‍याए । ती रिक्साचालक नबोली सुरु सुर अगाडि बढे ।
बिहान त्यस्तै १० बज्दैथियो। देवीनगरबाट मिलनचोक आउँदै गरेका एउटा रक्िसा चालकको कानमा उताबाट चर्को आवाज आयो । ती रक्िसा चालकले सेकेण्डभरमै रक्िसा मोडेर उनको सामुन्ने पुगे । ‘देवीनगर जाने, कति हो-’ – ती महिलाले भनिन्। रक्िसा चालकले ३० रूपैयाँ भनेपछि ती महिला कड्किएर बोलिन्, -‘सधै २० रूपैयाँ दिइरहेकी छु, २० दिन्छु हिंड् ।’ रक्िसा चालकले त्यो रकममा जान नमानेपछि तथानामको गाली गर्दै ती महिला साइड लागिन् ।
टाउकोमा चश्मा। कपालको स्टायल र कपडा लगाएको स्टायल सुहाउँदो थिएन। हातमा महंगा जस्तो देखिने मोबाइल फोन र साइडमा ब्याग थियो । अगाडिबाट अलिक पर पुगेको एउटा रक्िसालाई त्यहीबाटै चिच्याएर बोलाइन्, -‘ओए रक्िसा यहाँ आइज त।’ एक इन्च पनि पर पुग्न नमान्ने ती युवतीको सामुन्ने रक्िसा चालक आएर सोधे, कहाँ जानेहोला- उनले भनिन्, -‘ट्राफिकचोक जाने हो, कति हो पैसा-’ रक्िसा चालकले ४० रूपैयाँ दिनुस् न न भने। तर ती युवतीले निकै कडा स्वरमा भनिन्, -‘साला भेजा खराब भएको बेलामा तथानाम नबोल है, ३० दिन्छु हिंड्।’ हर्ेदा धनी बाऊकी छोरीजस्तो लाग्ने ती युवतीले जवरजस्त ३५ रूपैयाँ दिने भनेपछि त्यो रिक्सा अगाडि बढ्यो।
माथिका तीन पात्रहरूको दृश्य कुनै काल्पनिक हैन। काल्पनिक जस्ता लाग्ने यी दृश्य वास्तविक हुन्। बुटवलमा रक्िसा चलाउने रक्िसा चालकहरूको यथार्थ घटना हो। कहिले कसको गाली खानपर्छ, कहिले कसको पिर्टाई खानर्ुपर्छ। भनेजति पैसा माग्दा उल्टै गाली खानर्ुपर्छ। बोलाउँदा ओए रक्िसा भनेर बोलाउँछन्, आएर कुरा नमिले थर्काएर पठाउँछन्। बरु रक्िसा भाई भने हुन्थ्यो नी, हाम्रो नाम रक्िसा हो- अधिकांश रक्िसा चालकहरूको एउटै गुनासो छ।
यिनै रक्िसा चालकहरूको खास यथार्थ घटना बुझ्न शुक्रबार केही घण्टा समय निकाली रिक्साको अघि पछि र दायाँबायाँ हुनुपर्‍यो। रक्िसा र रक्िसा चालकहरूलाई बाहिरबाट आममानिसहरूले जे जसरी बुझेका छन् विल्कुलै फरक छ उनीहरूको कथा र व्यथा।
निकै नै कमजोर परविार। खान लाउन धौं धौ परेर रक्िसा भाडामा लिएर चलाएका छन् कोही। अस्पतालमा रहेको आफ्नो विरामीको खर्च तिर्न नसकेर रक्िसा चालक भएर हिंडेका छन कोही। आफ्ना आफन्तबाट टाढा भएर ज्यान पाल्न नसकेर हिंडेका छन् कोही। रक्िसा चालक सबै कमजोर परविारका र स्तरका छन्। तर पनि उनीहरूको कामलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैनन्। आफूहरूको पीडा सधै गुम्स्याएर राख्न बाध्य छन् रक्िसा चालकहरू।
‘पातलो शरीर, खैरे टिर्सट त्यो पनि ठाउ“ ठाउ“मा च्यातिएका। थोत्रिएको, मैलिएको पाइन्ट। बुटवलको मुख्य चोक ट्राफिकचोकमा रक्िसाको आड लिएर यात्रुको प्रतिक्षामा भेटिएका गुल्मीका राजन कुमालले एकैछिनको कुराकानीपछि आफ्नो बारेमा गुम्सीएको पोको फुकाल्न भ्याए। लुम्बिनी नर्सिङ होममा भाईको हात फ्याक्चर भएको छ। गुल्मीमा रहेको आफ्नो नाममा रहेको एउटा घर र वारी भाईकै लागि ल्याएको ऋणका लागि ९० हजारमा बेच्नुपर्‍यो। अझै ३ महिना औषधि खुवाउनुपर्ने भएकाले थप औषधोउपचारका लागि पैसा नभएकैले वुटवलमा केही हप्तादेखि रक्िसा चलाउन लागेको उनले बताए। यो छोटो समयमा पनि रक्िसा चालकहरूले भोग्ने कथा र व्यथा उनले पनि वेहोर िसके। भन्छन् उनी, -‘रिक्सा चालकहरू यहाँका नागरकि नै हैनन, चोरेर खाएको जस्तो व्यवहार देखाउँदारहेछन्।’
दिनभरी न घाम। न पानी भनेर यात्रुहरूको गन्तव्यमा पुग्नपर्छ। अलिकति ढिला भए उल्टै गाली खानुपर्ने पनि वाध्यता रक्िसा चालकहरूमा छ। गुल्मी अमरपुर २ का कुमालको जस्तै व्यथा र कथा श्याम भण्डारीको पनि छ। दाङको देउखुरीबाट केही महिनादेखि बुटवलमा रक्िसा चलाउँदै आएका भण्डारीले पनि निकै कारुणिक दुःख र व्यथा पोखे। विहानदेखि साँझसम्म मिहिनेत गरेर दैनिक खर्च पुर्र्‍याउनर्ुपर्छ, उनले भने, -‘सवै दुःख र कष्टलाई वेवास्ता गर्दै रिक्साको भाडा र दर्ुइछाक खानाको जोहो गर्न धौ धौ पर्छ रक्िसा चलाएर।’ तर पनि, रक्िसा चालकलाई धेरैले हेला गर्ने गरेको गुनासो उनले पोखे। आम र्सवसाधारण र यात्रुवाटै पीडा र दुःख पाउनुपरेको उनको दुःखेसो छ।
असिन पसिन हु“दै गन्तब्यमा पुर्‍याएपछि भाडा नपाएको दुःखसो पोख्छन् उनी। ‘गरबि भएपछि के गर्ने रक्िसा चलाएर भए पनि बाँच्नु त पर्‍यो,’ उनले भने-‘घरमा २ छोरा र छोरीसहित श्रीमती छ, आफूलाई सहित उनीहरूको दैनिक खर्च समेत रक्िसा चलाएरै पुर्‍याउनर्ुपर्छ।
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरसिकेको पनि धेरै वर्षभैसकेकेा छ। सरकार परविर्तन हुन्छ। विभिन्न देशबाट आर्थिक सहयोग हुन्छ। राज्यले हरेक वर्षकरोडौंको वजेट प्रस्तुत गर्छ। तर यी सबै कुराले रिक्सा चालकहरूको जीवनमा खासै फरक पारेको छैन।
पहिले पनि दिनभर रिक्सा चलाएर सा“झ-बिहानको छाक टार्ने चिन्ता हुन्थ्यो, अहिलेपनि उस्तै छ, ७ वर्षेखि रक्िसा चलाउँदै आएका महेश यादवले भने, -‘रिक्सा चलाएर माथि पुगिदैन, केही व्यवसाय गरौं खर्च हुँदैन, रोजगार गरौं कहि कतै पाइदैन।’
अधिकांश रक्िसा चालहरूको एउटा सबैभन्दा ठूलो गुनासो आफूहरूलाई निर्जिव सरह व्यवहार गर्नु हो। उनीहरूलाई कसैले पनि कुनैपनि प्रकारका न्याय नदिने गरेको गुनासो समेत व्याप्त छ। तर, आफूहरूलाई जति निर्जिव सरह व्यवहार गरेपनि र अरूले रक्िसा चालक भनेर हेला गरे पनि कुनै प्रवाह नगरकिनै अगाडि बढेका छन्, सबै बिर्सिएको जस्तै गरी।
कुनै गलत बाटोमा लागेको छैन, आफ्नै देशमा मिहिनेतले काम गरेको छु, कसैलाई दुःख पनि दिएको छैन,’ बुटवलमा धेरै वर्षेखि रकिसा चलाएरै जीविकोपार्जन गर्दै आएका विनीत शिलवालले भने, -‘इमान्दारतिाका साथमा काम गर्नुपर्छ जे काम गरे पनि हुन्छ, तर हामीलाई किन हेपिन्छ-‘ उनले रक्िसा चलाएरै ३ छोरी र एक छोरालाई शिक्षा दिलाएका छन्। घर्रखर्च समेत जुटाउ“दै आएका छन्। कपिलवस्तुका ३४ वषर्ीय शिलवालले बुटवलमा रक्िसास“ग सहयात्रा गर्न लागेको धेरै वर्षभयो। र्सव साधारणवाट हेपिने र निच्याउने वाहेक कति पटक ग्राहकले गन्तव्यमा पुगेपछि भाडा नतिरीकनै उल्टै थर्काएर पठाउने गरेको समेत उनले सुनाए। वुटवलमा सयौं रक्िसाहरू संचालनमा छन्। सबैका आ-आफ्ना दुःख छन्। सवैका आफ्नै व्यथा छन्। र कथा पनि। दुःख गरेर खाएका छन्, उनीहरूले केही विराएका छैनन्, चोरेर खाएका छैनन्। अनि उनीहरूको सम्मान खै त, के रिक्सा चालकहरू ‘रक्िसा’ हुन त- ।